လူမျိုး၊ဘာသာခွဲခြားသော စကားလုံးများကို အသုံးပြုခြင်းများ တိုက်ခိုက်ခြင်းများမှ ရှောင်ကျဉ်ကာ အတူတူ စည်းစည်းလုံးလုံး နေကြဖို့သင့်သော အချိန် ရောက်နေပါပြီ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Rebuttal to U U Hmaw Sayar’s attack on International Activists for pressuring UN and ICC actions
Malaysia’s version of Thidagu Sayadaw is arrested and charged with SEDITION for calling Chinese “visitors” brought in by British »
ViralBurma added6new photos.
ကုလားတွေကို အရင်မရှင်းခင် ဒါတွေကို ရှင်းအောင် လုပ်ကြပါ
ဟားဗာတ်နှင့် ကိန်းဘရစ်တက္ကသိုလ်တို့မှ ဘွဲ့ရရှိပြီး ကုလသမ္မဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ဦးသန့်၏ မြေးတော်သူ
သမိုင်းပညာရှင် ဒေါက်တာသန့်မြင့်ဦး ရေးသားသော ” ခြေရာပျောက်သောမြစ်” (The River Of Lost Footsteps) စာအုပ်၊ စာမျက်နှာ(၁၉၆)တွင် ကုလားဟူသော အဓိပ္ပါယ်ကို အောက်ပါအတိုင်း ရှင်းပြထားသည်။
“” ရှေးမြန်မာဘုရင်များ လက်ထက်ကတည်းက အနောက်တိုင်း၊တိုင်းတပါးမှလာသောသူ မှန်သမျှကို “ကုလား” အမျိုးအနွယ် ဟု ခေါ်ကြသည်။””
ထိုသို့ဆိုရပါက မည်သည့်နိုင်ငံ၊ မည်သည့်လူမျိုးတို့သည် ကုလားများ ဖြစ်ကြသနည်းဆိုသည် ကို အောက်ပါအတိုင်း ပြန်လည် လေ့လာသုံးသပ်စေလိုပါသည်။
(၁) ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဖွားမြင်တော်မူ ခဲ့သည့် လုဗ္မီနီဥယျာဉ်ကြီး နှင့် သတင်းသုံးတော်မူခဲ့သည့် ဗုဒ္ဓဂယာတို့မှာလည်း ကုလားပြည်များ ဖြစ်ကြသော နီပေါနိုင်ငံ နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ တို့တွင် တည်ရှိသည်။
(၂) ဘုရားပွင့်တော်မူပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကို ပြန်လည်ထွန်းကားပြန့်ပွါးအောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော အိန္ဒိယဘုရင် အသောကမင်း (King Ashoka)သည် ကုလားအမျိုးအနွယ် ဖြစ်သည်။
(၃)ရှေးမြန်မာမင်းများ လက်ထက်ကတည်းက မြန်မာရဟန်းသံဃာတော်များ ပညာတော်သင်သွားလေ့ရှိသည့် သီရိလကာင်္နိုင်ငံ (ယခင်-သီဟိုဠ်ပြည်) မှာလည်း ကုလားပြည် တခုထဲတွင် အပါအဝင်ဖြစ်သည်။
(၄) သမိုင်းအရ အနောက်တိုင်းသားမှန် သမျှတို့ကို ကုလားဟုခေါ်ဆိုနိုင်သောကြောင့် အမေရိကန်၊ အင်္ဂလန်၊ ပေါ်တူဂီ အစရှိသည့် ဥရောပလူဖြူ များကိုလည်း ကုလားဟု ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။
(၅) အလားတူ မူစလင်ဘာသာ နှင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာတို့အစပြု ခဲ့သော အာရပ် အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများ ဖြစ်ကြသည့် ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ အီဂျစ်၊ တူရကီ၊ အီရန်၊ အီရတ်၊ အစ္စရေး အစရှိသော နိုင်ငံများ မှာလည်း ကုလားနိုင်ငံများပင် ဖြစ်ကြသည်။
ဤသို့သော အထက်ပါ အထောက်အထားများကြောင့် ကုလားတိုင်းသည် မူစလင်ဘာသာဝင်များ မဟုတ်ကြပါ။၎င်းတို့သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၊ ဟိန္ဒူ ဘာသာဝင်များ လည်း ဖြစ်နိုင်သလို ဂျူးဘာသာ နှင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များ လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ထို့အတွက်ကြောင့် ယခုလက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွါးနေသော ရခိုင်-ဘင်္ဂလားအရေး၊ မိတ္ထီလာအရေးတို့နှင့် မရှုပ်ထွေးမိစေရန် ကုလားအမျိုးအနွယ်တို့ကို ၎င်းတို့၏ မွေးဖွားရာအရပ်ဒေသ (သို့)ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ(သို့) လူမျိုးအမည်တို့ကိုသာ အမည်တပ်၍ ခေါ်ဆိုသင့်ပါသည်။
ဥပမာ – ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသားဖြစ်ပါက ဘင်္ဂါလီ၊ မူစလင်ဘာသာဝင် ဖြစ်ပါက မူစလင်၊ ဂျူးဘာသာဝင် ဖြစ်ပါက ဂျူးလူမျိုး အစရှိသဖြင့်..
သို့မှသာလျှင် စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အဓိကရုန်းများ မတော်တဆဖြစ်လာခဲ့ပါက အပြစ်မဲ့သော အခြားဘာသာဝင်များကို မထိခိုက်စေမည် ဖြစ်ပါသည်။
နောက်ထက်ထပ်မံ၍ သိထားသင့်သည့်အချက်မှာ ကမ္ဘာ ပေါ်တွင် မူစလင်ဘာသာပေါင်း ခန့်မှန်းခြေ သန်းပေါင်း (၂၂၀၀) ခန့် ရှိပြီး ၎င်းတို့ အများစုနေထိုင်ကြသောနိုင်ငံများတွင် ဝမ်းစာရှာဖွေရန် သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင် နေကြသော မြန်မာအပါအဝင် တိုင်းရင်းသားပေါင်း လက်ရှိတွင် သိန်းနှင့်ချီ၍ ရှိနေပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မကြာသေးမီက ဖြစ်ခဲ့သော ဘာသာရေးအထိကရုန်းများ ပုံစံမျိုး ထပ်မံ၍ ဖြစ်ပွါးခဲ့ပါက အဆိုပါ သိန်းနှင့်ချီသော မြန်မာတိုင်းရင်းသားတို့အတွက်လည်း လုပ်ကိုင် စားသောက်ရန် အဆင်ပြေတော့မည်မဟုတ်သလို ၎င်းတို့အား အားထားမှီခိုနေရသော မြန်မာနိုင်ငံရှိ မိဘဆွေမျိုးများအားလည်း ဒုက္ခရောက်သွားစေနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ-မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပွါးခဲ့သော ရခိုင်-ဘင်္ဂါလီမူစလင် အထိကရုန်း၏ ဂရက်ရိုက်မှုကြောင့် မလေးရှားနိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသော မြန်မာအလုပ်သမားအချို့ အသတ်ခံခဲ့ရပုံကို ပြန်လည် အောက်မေ့ သတိရစေခြင်ပါသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် မြန်မာလူမျိုးတိုင်း မမေ့မလျော့သင့်သည့် အချက်မှာ ကောင်းသူ၊ ဆိုးသူတိုင်းသည် မည်သည့်ဘာသာ၊ လူမျိုးတို့တွင်မဆို ရှိကြသည်ဆိုသော အချက်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မူစလင်ဘာသာဝင်အားလုံးကိုလည်း ဆိုးသည်ဟု အားလုံးကိုခြုံ၍ မသုံးသပ်ကြစေလိုပါ။ အနီးစပ်ဆုံး ဥပမာ ပေးရပါက ယခုကျရောက်တော့မည့် ဇူလိုင် (၁၉)ရက်- အာဇာနည်နေ့၌ မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးတို့ အလေးပြုရမည့်သူများထဲတွင်ပါဝင်သော မြန်မာ့ပညာရေးဝန်ကြီး ဦးရာဇက်မှာ မူစလင်ဘာသာဝင်တဦးပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဦးရာဇက်သည် မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးအတွက် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့နှင့် အတူ ကိုလိုနီနယ်ချဲ့တို့ကို တွန်းလှန်ခဲ့သော အာဇာနည်ကြီး တဦး ဖြစ်ပြီး မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကို စတင် တည်ထောင်ခဲ့သောသူလည်း ဖြစ်ပါသည်။
ထပ်မံ၍ သံသယမရှင်းသေးပါက မလေးရှား၊ စင်ကာပူ အစရှိသည့် မူစလင်ဘာသာဝင်များ အများအပြားနေထိုင်ကြသည့် နိုင်ငံများတွင် သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ပြီး ပြန်လာကြသော မိမိတို့နှင့်နီးစပ်ရာ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတို့အား ထိုနိုင်ငံများမှမူစလင်ဘာသာဝင်တို့၏အကြောင်းကို လိုက်လံမေးမြန်း၍ အမှန်တရားကို သိရှိ၊နားလည်စေလိုပါသည်။
အချုပ်အနေဖြင့် သိရှိစေလိုသည်မှာ လူဦးရေ သန်းပေါင်း ၇၀၀၀ ကျော်ရှိသောကမ္ဘာတွင် သန်း ၆၀ သော မြန်မာပြည်၏လူဦးရေမှာ ကမ္ဘာ့ လူဦးရေ၏ ၁ ရာခိုင်နှုန်းမျှပင် မပြည့်သည့်အပြင် ကမ္ဘာကြီးသည်လည်း မြန်မာနိုင်ငံကို ဗဟိုပြု၍ လည်ပတ်နေခြင်း မဟုတ်ပါ။ထို့ကြောင့် နိုင်ငံကို ကမ္ဘာနှင့်ရင်ဘောင်တန်းနိုင်စေရန် မလိုအပ်သော မာနများကိုထား၍ အကျိုးမရှိသောအလုပ်များကို လုပ်နေကြမည့်အစား တဦးနှင့်တဦး အမုန်းပွါးစေမည့် လူမျိုး၊ဘာသာခွဲခြားသော စကားလုံးများကို အသုံးပြုခြင်းများ တိုက်ခိုက်ခြင်းများမှ ရှောင်ကျဉ်ကာ အတူတူ စည်းစည်းလုံးလုံး နေကြဖို့သင့်သော အချိန် ရောက်နေပါပြီ ဟူ၍သာ ကောက်ချက်ချ မိ ပါတော့သည်။
စကားချပ်- နိုင်ငံချမ်းသာကြွယ်ဝလာပါမှလည်း တိုင်းတပါး၏ကျူးကျော်မှုဒဏ်မှ ကင်းဝေးစေရန် အဓိကကာကွယ်နိုင်သည့် နယ်စပ် ခြံစည်းရိုးကိုကြီးကြီးမားမား ခိုင်ခိုင်မာမာနှင့် လုံအောင်ခတ်ဖို့ ရန်ပုံငွေလောက်ငှလာမည်ဖြစ်ပါသည်။
River of Lost Footsteps Book by Thant-Myint Oo and other sources.
This entry was posted on June 19, 2014 at 11:45 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.